Dowladda Hareermarsan Dastuurka Soomaaliya Ayaa Ka Warcelisay Go’aankii Beesha Caalamka Ee Ka Dhanka Ahaa Muddo Korarsigeeda Hareermaray Dastuurkii – Great Banaadir
MUQDISHO (WBW: The GBM) – War kasoo baxay Dowladda Hareermarsan Dastuurka Soomaaliya, gaar ahaana Wasaarraddeeda Arrimaha Dibadda ee iyadane Hareermarsan Dastuurka Soomaaliya, ayaa waxey ka warcelisay Go’aankii Beesha Caalamka ay uga soo horjeesatay Muddo Kororsiga Hareermarsan Dasuurka Soomaaliya isla markaana ay Beesha Caalamka ay ugu Hiilineysay Dadka Soomaaliya ee Demoqaraadiga ah; Diidanna Diktatooriyadda Cusub ee Soomaaliya. a kororsiga labada sano oo dhawaan uu meelmariyay Baarlamaanka Soomaaliya.
Qoraalka Dowladda Hareermarsan Dastuurka Soomaaliya Ayaa U Dhignaa Sida Soo Socoto:
Dadka Soomaaliyeed waxay u oo manaayeen fursad ay ku gutaan xuquuqdooda dimoqraadiyadeed oo ay ugu adeegsadaan awoodda codkooda doorashada hoggaamiyeyaashooda. In kasta oo maamulkani dadaal badan ku bixiyay himiladan, Sebtember 17th, 2020, hoggaamiyeyaasha siyaasadeed ee Soomaaliya waxay isku raaceen in la joojiyo hannaankaas oo la qabto doorasho dadban taa beddelkeeda.
Warbaahinta Banaadir Weyne (WBW: The GBM [The Great Banadir Media]) waxaa markasta lagala socon karaa wararka xiisaha leh isla markaana kulul.